Akwụkwọ ahụaja nke egwu na ndị ọbụ abụ maka gam akporo | Gam akporosis
You chọrọ hazie ihuenyo gị gam akporo ekwentị na ọkacha mmasị gị na-agụ egwú ma ọ bụ ìgwè? Ugbu a, ọ ga - ekwe omume na nhọrọ akwụkwọ ahụaja, ndị na - agụ egwu na otu ị masịrị gị. Ọbụghị naanị na ị ga-ebu egwu gị n'oge niile, ịnwekwara ịnwe foto kacha mma na ekwentị gị.
Chọpụta na foto a foto kachasị mma nke otu ọkacha mmasị gị ma ọ bụ ndị ọbụ abụ, na mma kacha mma, ma họrọ nke kacha mma maka ekwentị gị dị ka akwụkwọ ahụaja. Elegharala ego ọ bụla anya!
Mgbakọ na nke kacha mma music na -bụ abụ na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo. Nwere ike iji hazie gị gam akporo na ọkacha mmasị gị na-agụ egwú ma ọ bụ ìgwè? Ọfọn, ebe anyị na-enye gị ụfọdụ nhọrọ.
Ọ bụrụ na i kwenyeghi, lee ndị ọzọ na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo n'efu.